के-के हुन् शारीरिक सम्पर्कका फाइदा र बेफाइदा ? जान्नुहोस् ! Artha daily : Best Online Nepali news portal
अर्थ डेली प्रकाशित: २०७६-४-१७ गते
आधुनिक समाजमा हाम्रो जीवनयापनको लागि खाना, पानी, हावा जस्तै यौन पनि एक शारीरिक आवश्यकता रहेको छ । यसलाई सक्रिय राख्नु युवाको लागि अत्यन्त जरुरी समेत रहेको छ । शारीरिक सम्पर्क नगर्दाको कैयौं बेफाइदा हुन्छ भने त्यस्तै केही हाम्रो नराम्रो बानीले हामीलाई शारीरिक सम्पर्कको मोर्चामा कमजोर बनाइदिन्छ ।
शारीरिक सम्पर्कका फाइदा र बेफाइदा निम्न छन् ।
यौन सम्पर्क नगर्ने मानिस सँधै तनावमा डुबिरहन्छन् र यो तनावले हाम्रो जीवनको सबै आवश्यक चीजलाई नराम्रोसँग प्रभावित गर्छ । काम, पढाई र निजी सम्बन्धमा तनावले विषको जस्तै काम गर्छ । यौन सम्पर्कको धेरै फाइदाहरु हुन्छन् तर केही नोक्सान पनि हुन्छन् । भनिन्छ नि, अतिले क्षति हुन्छ । यौनको मामिलामा पनि यो कुरा लागु हुन्छ ।जसको स्टामिना धेरै राम्रो छ उनीहरुले दिनमा २-३ पटक यौन सम्पर्क गर्दा खासै समस्या हुँदैन । तर मुटुरोगीहरुलाई भने यसले मुस्किल पैदा हुन सक्छ ।
जो युवाहरुलाई हस्तमैथुनको लत लागेको छ उनीहरुलाई त्यसले समस्यामा पार्न सक्छ । अहिलेका युवाहरु धेरैमा पोर्न सिनेमा हेर्ने लत लागेको हुन्छ । यो लतले उनीहरुलाई यति फसाउँछ कि उनीहरुको दिमागमा हरपल त्यहि कुरा मात्रै खेल्न थाल्छ । यसकारण उनीहरुलाई असली सेक्सको क्रममा त्यो उत्तेजना आँउदैन जुन पोर्न हेर्दा आउँछ ।
कैयौंपटक युवाहरुले आफ्नो साथीको यौन जीवनको किस्सा सुनेर कम्प्लेक्सको शिकार हुने गरेका छन् । आफूलाई कमजोर सोच्न सक्छन् वा यौन कुण्ठा पाल्न सक्छन् । यसले उनीहरु हडबडाउने र रिसाउने हुन्छन् । यो चीज उनीहरुको बोलचाल र व्यवहारमा पनि देखिन्छ ।
धुम्रपान गर्नाले पनि यौन जीवन नराम्रोसँग बिग्रन्छ । आजकालका युवाहरु धुम्रपानलाई फेसन वा जीवनशैलीको हिस्सा मानेर अरुभन्दा देखिनको लागि स्मोकिङ गर्ने गर्छन् । यसले जनेन्दि्रय खुम्चनेदेखि नपुंशक हुने सम्म खतरा रहन्छ ।
मोटोपना, अनियमित जीवनशैली र मानसिक तनाव जस्ता अन्य कैयौं तत्वले सेक्सको खेल बिगार्न सक्छ । युवाहरुले यस्तो कमजोरीलाई टाढा गरेर स्वस्थ अवस्थामा मात्रै यौनकार्य गरेमा मात्रै उनीहरुले युवाअवस्थाको आनन्द लिन सक्छन् ।
याद राख्नुपर्ने कुरा जो युवाहरुको सेक्सुअल आवश्यकता समयमै पुरा हुन्छ उनीहरुको स्वास्थ्य यस्तो गर्न नपाउनेको तुलनामा राम्रो हुन्छ । यसैले यौन र स्वास्थ्यको तालमेललाई सहि बनाएर मात्रै आफ्नो यौन जीवन रमाइलो बनाउनुहोस् ।
सम्बन्धित विषय: रोचक संसार
अनौठो परम्परा : जहाँ महिलाको योनी छेदन गरिन्छ
यस्ता पुरुषसंग यौनसम्पर्कमा रुची राख्छन् महिला ? के भन्छ सर्भेक्षण !
पुरुषको भाग्य चम्क्याउने युवतीमा यस्ता हुन्छन् लक्षण
यसरी हुन्छ पोर्न फिल्मको सुटिङ
तपाईलाई लाग्ला, मैले शारीरिक सम्पर्कको बारेमा सबै कुरा जानेको छु र बुझेको छु । यसबारे सामान्य सबै जानकारी मसँग छ ।..